Archive du 20190318
Marc Ravalomanana “Tena namela mamy i Manandafy”
« Anisan'ny nianatra sy naka tahaka azy aho... Indreto izahay tonga mifankahery, mifampionona, noho ny nandaozan'ny Raiamandreny, ilay andrarezina, ilay mpanao politika mahay, nahafoy ny ainy tamin'ny andro sarotra rehetra, tsy nitsahatra nanoro hevitra sy nanampy ...
TIM K25 Boriborintany faha-2 Vonona tanteraka Rastany sy ny ekipany
Fifampiarahabana noho ny fahatrarana ny taona vaovao, fisaorana ny mpanohana tamin’ny ezaka rehetra natao tamin’ny fifidianana filoha fihodinana voalohany sy faharoa, ary ny lehibe indrindra dia ny fanolorana ny kandida depioten’ny antoko TIM eny amin’ny Boriborintany
Fitantanana raharaham-panjakana Fanina ny ankamaroan’ireo minisitra
Iarahana mahita fa nandritra ny filankevitry ny governemanta sy filan-kevitry ny ministra faramparany dia betsaka ny tompon’andraikitra ambony izay najanona tamin`ny asany izay no soloina olon-kafa.
Fifidianana solombavambahoaka Miala any indray ny ketrika hala-bato bevata…
Izahay dia efa maheno siosio, fa tena halatra mioampampana indray no kotrehina amin’ity fifidianana solombavambahoaka ity, indrindra ety amin’ny boriborintany faha-2 ataon’ny andaniny, izay tsy tononiko anarana, hoy ny kandida avy amin’ny antoko Tiako I Madagasikara Randrianarisoa Stanislas na “Rastany”.
Tsy vitan’ny nofinofy io a !
Eo indray izao ity Jean ity dia hilongilongy be tsy ahitan-teny mihitsy mandram-pahatapitry ny fety. Mba omeo izay vaovao any aminao any aloha fa tsss..!!
Raharaha kolikoly tao amin` ny ENMG Misy minisitra teo aloha voarohirohy
Niakatra fampanoavana ny zoma lasa teo teny amin`ny Pole Anti-Corruption (PAC) ny raharaha fifaninana hidirana ao amin`ny sekoly ambony fanofanana mpitsara sy mpiraki-draharaha (ENMG).
Varotra fiara amin’ny Facebook Tra-tehaka ny mpisoloky 38 tapitrisa Ariary
Teny Ambohitsoa no tra-tehaky ny polisy avy ao amin’ny sampana ady amin’ny heloka bevava ny mpisoloky iray izay mpivarotra fiara anaty tambazotra sosialy (Facebook). Efa ela no nikarohana azy ka nyalarobia 13 martsa teo izy vao voasambotra teny amin’ny trano fonenany. 38 000 000 ariary, io no vola efa noraisiny tamin’ny alalan’ny filazana fa mivarotra fiara lehibe vita Alemaina avy any iray
Salon Asia 2019 Handray anjara mavitrika ny Baolai
Ny tranombarotra « Baolai » dia handray anjara ao anatin' ny « salon Asia » etsy amin' ny Zone Forello Tanjombato manomboka ny 30 martsa hatramin' ny 07 aprily 2019 hoavy izao.
Lainga marivo tototra no naely tamin'ny tambajotran-tserasera tamin'ny faran'ny herinandro teo izay mahakasika ny fivoahana am-ponja an'i Alain Ramaroson.
Zon’ny fokonolona eto Madagasikara Ho atao ady sisika eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena
Nifarana ny faran’ny herinandro teo tetsy amin’ny restaurant Tsiky Ambohijatovo ny fivoriambe mikasika ny tatitra fanao isaky ny 4 taona momba zon’ny fokonolona eto Madagasikara.
Tsipy kanetibe « Doublette Gentleman + Elite » Lasan’i Pôta sy Tafita ny « Concours Spécial Mimi Pétanque 2019 »
Tontosa omay alahady 17 martsa 2019 tetsy amin’ny boulodrôme Cbt Mahamasina ny lalao famaranana tamin’ny andiany voalohany tamin’ny fifaninanana Tsipy kanetibe an’olon-droa miaraka « Doublette Gentleman + Elite » nokarakarain’i « Mimi Pétanque 2019 ».
Mandady indray ny trambo
Hivoaka amin’ny fomba ofisialy rahampitso 19 martsa ny lisitra ofisialin’ireo kandida hifaninana solombavambahoaka.
Fitohanana eto an-drenivohitra Tsy vita ny 2/3-n’ny toro tokony hataony ny taxi-be iray
Tsy hisy vahaolana intsony ny fitohanana eto an-drenivohitra hoy Randriambao Jacky, mpikambana ao amin’ny filan-kevitry ny koperativa Fitsema Tselatra raha toa ka tsy mandray ny andraikiny ny fitondram-panjakana.
Lozam-piarakodia Mahazo vahana ny tsy firarahiana traboina
Tsy any amin’ny Faritra ihany fa hatreto Andrenivohitra, tsy miraharaha ireo maratra ny mpanatri- maso fa miapanga tena maka sary no mahamaika.
Sekoly ambony UPRIM Namoaka teknisiana 165 mianadahy
Mitombo isa hatrany ireo teknisiana manam-pahaizana eto amintsika. Tanora lahy sy vavy 165 mianadahy indray no navoakan’ny sekoly ambony UPRIM ny faran’ny herinandro teo, tao amin’ny sampana tertiaire.
Joël Randriamandranto “Mpizahan-tany 800 000 isan-taona no tanjona”
Nandritra ny valan-dresaka niarahana tamina mpanao gazety vahiny iray no nilazan` ny ministry ny fitaterana sy ny fizahan-tany, Joël Randriamandranto, fa ny fizahan-tany no anisan` ny sehatra nampiditra vola betsaka tao anatin`ny kitapom-bolam-panjakana satria nitentina 520 tapitrisa dolara izany tamin`ny taona 2018.
Kaominina Ambohimangakely Namboraka ny olany ny mponina
Misy fokontany 18 ny kaominina Ambohimangakely. Nanatanteraka fifampiarahabana nahatrarana ny taona vaovao 2019 teny an-toerana izy ireo tamin’ny sabotsy 16 martsa lasa teo.
Fahantran’ny Malagasy Mainka mahazo vahana
Tsy mbola hita mihitsy aloha hatreto ny akony ara-toekarena entin’ny fitondrana vaovao. Mbola matroka ary tsy mbola niova hatrany ny tarehimarik’ i Madagasikara ary taraiky amin’ny lafiny maro.